खुसीको खबर: प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले ह्वात्तै वृद्धभत्ता बढाए कति पुग्यो ? – Khabar Patrika Np
खुसीको खबर: प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले ह्वात्तै वृद्धभत्ता बढाए कति पुग्यो ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र १४, २०७७ समय: १६:३३:०७
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वृद्धभत्ता बढाए चाँडै ४ हजार पुु-याइने घोषणा गरेका छन् । अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिलाको सन्दर्भमा आयोजना गरेको भेलामा ओलीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
‘यस देशमा जनतालाई हेर्ने हामीबाहेक को छ ? गफ गरेर हुन्छ ?०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट हामीले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जसलाई त्यसबेला वृद्धभत्ता भनियो अहिले त्यसलाई ३ हजार पुु-याएका छौं ।
५ हजार पुु-याउने हाम्रो उद्देश्य छ,’ ओलीले भने,‘४ हजार त छिट्टै पुु-याइहाल्छौं । छिट्टै पुु-याउँछौं हामी । तर, जनतालाई हेर्ने अरु कोही छ ?’ वृद्धवृद्धा र शारिरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो सरकारबाहेक अरुले नसम्झिएको दाबी पनि उनले गरे ।